izinkinga zamazinyo , kukhona amaningi njengoba kunabantu. namazinyo Okokuqala ezilimele ngenxa ukudla enganele ukucutshungulwa, abampofu inhlanzeko yomlomo kanye nokuntuleka ukwelashwa. Manje, bezihlahla kanye zomdabu zihlupheke ngenxa yokuthambekela choice omkhulu ukudla, ikakhulu ngokweqile kusetshenzwe futhi amnandi, wonke nokwephulwa izimiso umsoco ofanele kanye nendlela yokuphila. Kodwa izinga yentuthuko amazinyo yesimanje yenza kube lula ukuphendula umbuzo: "Indlela aphathe ukubola kwamazinyo?", Kuze phendla it nga ukuba usaqala kakhulu futhi izindlela mnene ukwelapha oyedwa uhambo kudokotela.
Izimbotshana noma izimbobo emazinyweni
Caries - inqubo sokugembula ezilimele izicubu zamazinyo, okuholela kwetinhlavu izimbotshana. Kule nqubo, amazinyo izicubu kanzima sashintsha futhi demineralized. Kungakhathaliseki yimiphi izigaba ezine lesi sifo siwukubhujiswa, kodwa isifo esigabeni sokuqala kuphela obonakaliswe neze selitholakala umonakalo koqweqwe lwawo, ngaphandle ubuhlungu. Isigaba sokuqala senzeka cishe ziyasibona umuntu. Ngakho-ke, kulesi sigaba, impendulo yombuzo indlela yokuphatha caries, kulula - ngosizo imikhiqizo ezikhethiwe inhlanzeko (wokuxubha, isixubho, njll).
Izinyathelo asele mazenzeke nesanda ubuhlungu nokuzwela ezihlukahlukene ezintweni, amakhemikhali (omuncu, sweet) lokushisa (abandayo, kushisa) kanye mechanical (ukudla okuqinile). Lapho lokhu ukuvela izimbotshana ezithathelwanayo letingemasayizi lahlukene kanye izinga lomonakalo.
Ngokuvamile, izindlela nokwelashwa caries zamazinyo zihlanganisa ukususwa izingxenye ezilimele we ukugcwaliswa obengeziwe endaweni engaphelele, eliqinile impahla ofakwe. Le ngxenye ezilimele uvala ipuleti ekhethekile noma yokwakha yaseGrisi.
Kafushane mayelana lwezimpawu
izinto Ukugcwalisa zihlukaniswe ezihlukahlukene Ukwakheka ukuqinisa, epulasitikini, inhlanganisela futhi amalgams. Ngaphandle uphawu akunakwenzeka usizo lokubhekana nenkinga enkulu - indlela yokuphatha caries. Usimende Nokho impahla ngemali ephansi kakhulu, kodwa kungagcini isibalo imibala, kukubi "ethe njo" kwamanzi ngezinyo, futhi ngempela enhle. Plastics futhi inhlanganisela kusulwe ngokushesha futhi ukushintsha umbala walo. Amalgam, naphezu amandla ayo ezehlukile futhi ihlala isikhathi eside, yiba ezingemnandi metallic umbala kanye flavour.
Modern zezinhlanganisela photopolymer ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki izinto ngenhla futhi ube nenani elikhulu eziwusizo. Nokunye okuningi wajoyina ngokuphelele, ethe njo ebusweni izinyo, zingabantu okuhlala kakhulu, bathi umthunzi esitebeleni kwaphela amashumi eminyaka amelana nemihuzuko. Ngaphezu kwalokho, ezihlukahlukene imibala kanye shades kwale nto unike amandla ukukhethwa oluhambisana esiphelele smile engokwemvelo isiguli. I polymer kuyinto kakhulu idale ingxenye ezikude izinyo. Ngakho, kungenzeka ukubuyisela noma ingxenye, noma dala cishe i izinyo lonke. Ukubukeka of wokusika noma lwendabuko ngeke lingafani yasekuqaleni futhi zemvelo. Kodwa ezinye izinto zisasetshenziswa amazinyo. Ngokwesibonelo, raznosortnyh ukuqinisa elisetshenziswa umkhuba ezingane, ngoba ubuthi ongaphakeme, kanye nabantu abadala - njengesisekelo ofakwe photopolymeric noma ukulungiswa ezincane. Plastics - ukuze aqede izinkinga ezincane besisu, ukufaka ofakwe yesikhashana noma izinto njengamaphayona wesigiyani.
Kodwa naphezu kwezinselele ukhetho olukhulu izinto zokwelatjhwa kwamazinyo, akekho kubo ngeke ithathe isikhundla namazinyo zemvelo. Kuphela zingabantu ikhambi ekahle, wadala ngokwemvelo kubantu. Futhi akukho ukwelashwa caries akuyona panacea salokhu enkingeni. Nakuba caries kwabantu abahlakaniphile iphathwa? prophylaxis kuphela esithathelanayo izinqubo sokuvuvukala ngalo ingaphakathi ngomlomo kuyisinqumo elula kakhulu, esebenza kahle futhi zilungile.
Prevention njengoba Isikhali esinamandla kunazo zonke yokulwa nesifo
Caries Prevention kuhlanganisa ngaphandle izici okubangela lesi sifo, futhi sandise izicubu ukumelana amathonya alimazayo. Mhlawumbe uqala ngokufanele ukunakekela zokuvimbela ngisho phakathi kwengane esiswini wengane kanye ingaqedi kuze Esegugile. Naphezu inkimbinkimbi imisebenzi, amandla kanye yabo kahle kukhona omkhulu.
Ukudla okunengqondo, ukudla umnyuziki nangokulinganisela, sanitary - imithetho yenhlanzeko, indlela yokuphila enempilo - lena impendulo engcono a buthule futhi kubuhlungu "indlela yokuphatha caries ???". Kuyinto isikhali ekahle ekulweni kunjalo ngezifo eziningi, okufanayo kusebenza isifo kwamazinyo. Ukugwema kariesprovotsiruyuschih izici ezihlukahlukene (ukudla amnandi futhi ethambile, ukuhlukumeza njalo ane-alikhali zemvelo imvelo ngalo ingaphakathi ngomlomo, edonsa ukudla okushisayo futhi kubanda kakhulu, ukusetshenziswa canines njengoba openers schelkushki et al.) Bazokwazi ujike kuyiwe nodokotela wamazinyo ulwazi zokwelapha-prophylactic.
Fibromatosis gum: izimbangela, amafomu, izimpawu, ukwelashwa. Hyperplasia gingival
Izinyo mhlophe inqubo: ukubuyekeza nezincomo
Ukuqinisa isitebhisi: ukubala futhi isikimu
Vietnam, kumangaza futhi ezingalindelekile. Ezokungcebeleka namahhotela eVietnam.
Dedalus Village 3 * (eKrethe, Greece): incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Umuthi 'Kolofort ": ukubuyekezwa odokotela, yokusetshenziswa, ukwakheka, intengo. Analogs "Koloforta"